အင်တာနက်လိင်စွဲ - ပင်ကိုယ်မူလသုတေသန (၂၀၁၂) - သင်၏ ဦး နှောက်တွင်порно
2012, Vol ။ 20, အမှတ် 2, စာမျက်နှာများ 111-124 (Doi: 10.3109 / 16066359.2011.588351)
မာကုဃ Griffiths က, MD*
နိုင်ငံတကာဂိမ်းသုတေသနယူနစ်, စိတ်ပညာဌာနခွဲ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်,
Burton လမ်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, NG1 4BUဗြိတိန်
ပေးစာယူစာ: မာကုဃ Griffiths က, MD
နိုင်ငံတကာဂိမ်းသုတေသနယူနစ်, စိတ်ပညာဌာနခွဲ, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham Trent တက္ကသိုလ်, Burton လမ်း, ဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham, NG1 4BU, ဗြိတိန် + 44 (0) 1158482401 + 44 (0) 1158482390 [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အင်တာနက်ထွန်းကလူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံနိုင်သည့်အတွက်အခြားအလတ်စားဆက်ပြောသည်သိရသည်။ ဒီအွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏ passive စားသုံးမှုကနေကျဘာချက်တင်ခန်းထဲမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများ၏အပြန်အလှန်လဲလှယ်ဖို့နေကြပါတယ်။ ဒါဟာ access ကို, တတ်နိုင်နှင့်အမည်ဝှက်ဝယ်ယူ, ဖွံ့ဖြိုးရေး, နှင့်အွန်လိုင်းလိင်၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အင်တာနက်ကိုအလားအလာစေအရေးပါသောအချက်များဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်ကြသည်။ အခြို့သောအဘို့, အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, သူတို့ရဲ့အော့ဖ်လိုင်းလိင်တစ်ဦးအဖြည့်အဖြစ်အသုံးပြုကြသည် တခြားသူတွေကိုသော်လည်း, သူတို့သည်အလားအလာအင်တာနက်စွဲခြင်းနှင့်လိင်စွဲလမ်းကြားရှိလမ်းဆုံအဖြစ် conceptualized နိုင်သည့်အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်းအတွက်ရရှိလာတဲ့တစ်ဦးအစားထိုးအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ လက်ရှိစာပေ, ဤ psychopathologies အကြားရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ခှဲခွားလိုင်းရှိပေါ်လာတော်မမူကြောင်းအကြံပြု.
ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာလူကြီးများအတွက်အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲစုံစမ်းစစ်ဆေးသောပင်ကိုယ်မူလလေ့လာမှုများတစ်ဦးပြည့်စုံခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ပေးထို့ကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါးအရည်အသွေးနှင့်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြကြောင်းအနောက်တိုင်းနိုင်ငံများတွင်ကောက်ယူကိုးအရေအတွက်လေ့လာမှုများအပေါ်အခြေခံပြီး, အဲဒါကိုမထိခိုက်သည့်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးမှဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သကဲ့သို့အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေမြားတှငျပါဝငျခွငျး, ကော်လံကလွဲနေတယ် go နှင့်အင်တာနက်လိင်စွဲလမ်းမှုနိုငျကွောငျးကောက်ချက်ချခဲ့သည်.
အထူးသဖြင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုအစစ်အမှန်ဘဝလိင်စွဲလမ်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများမျှဝေပေမယ့်ကအတူပမာဏမှာတူညီခံရဖို့မဟုတျကွောငျးကိုအင်တာနက်စွဲလမ်းတစ်ခွဲပုံစံအဖြစ်အင်တာနက်ကိုလိင်စွဲလမ်း၏ရောဂါဗေဒ status ကိုတည်ထောင်နိုင်ရန်အတွက်အနာဂတ်သုတေသနများအတွက်ဂယက်မှရေးဆွဲနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဆေးခန်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအဖြေရှာတဲ့မူဘောင်ဘို့လိုအပ်ကြောင်းကိုအင်တာနက်လိင်စွဲလမ်းအင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ၏အလားအလာ psychopathological အရည်အသွေးတွေနှင့်ဂယက်ရိုက်နားလည်သဘောပေါက်ဆီသို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအဖြစ်အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်အကဲဖြတ်ရန်။